'अर्गानिक' ओखरेनीको सौन्दर्य: आहा ! ओखरेनी - 761खबर.com
'अर्गानिक' ओखरेनीको सौन्दर्य: आहा ! ओखरेनी
२४ दिन अगाडि ७६१ खबर
सिन्धुपाल्चोक, असोज ११
उत्तरतिर टलक्क टल्किएको लाङ्टाङ हिमशृंखला। त्यही हिमालबाट चल्ने सिरसिर शीतल बतास। पूर्वतिर गोब्रेडाँडा र लामीडाँडाको सुन्दरता। पश्चिमतिर आशीर्वाद दिन विराजमा नौलीङ्गेश्वर महादेव। साँझपख दक्षिण फर्कंदा झिलमिलाइरहेको चौतारा बजारको दृश्य। त्यसमाथि स्थानीय शेर्पाको आतिथ्यतासँगै लेकाली आलु र मुलाको स्वाद।
सिन्धुपाल्चोकको साबिक तीन वटा गाविस भोटेनाम्लाङ, लाँगार्चे र सिम्पालकाभ्रेको सिमानाको रुपमा उभिएको छ ओखरेनी। समुद्री सतहबाट २२५० मिटर उचाइमा रहेको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाँउपालिका र इन्द्रावती गाँउपालिकाको शिर ओखरेनी कुनै कालीगढले फुर्सदमा बनाएको सुन्दर चित्रभन्दा कम छैन।
शेर्पा जातिको बाहुल्य रहेको ओखरेनीलाई थप सुन्दर बनाएको छ सेता गुम्बा, थरीथरीका गुराँस अनि भर्खरै निर्माण सम्पन्न गरिएको सुनौलो ३५ फिटको बुद्धमुर्तिले। अझ पुनर्निर्माणको क्रममा रंगीचंगी छाना लगाइएका सुन्दर बस्तीले ओखरेनीलाई सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गरेको छ।
ओखरेनी होइन, ओकराने जनजिब्रोमा ओखरेनी नामले नै प्रख्यात भएपछि स्थानीयहरु भने आफ्नो ठाँउलाई पुरानै नाम अर्थात् ओकराने नामले नै चिनिन चाहन्छन्। ओक अर्थात् गहिरो र राने अर्थात् तीर्थस्थल या आशीर्वाद। समग्रमा ओकराने नाम हुँदै यो स्थान अहिले ओखरेनीबाट चिनिन्छ।
स्थानीय पदमबहादुर लामा ९६५० bका अनुसार राणाकालमा यो स्थानमा राणाहरुले आएर ओखरको बोट रोपेकाले यसको नाम बिस्तारै ओखरेनी हुन पुगेको हो। ‘हामी ओकरानेबाटै परिचित हुन चाहन्छौं,’ उनले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्दै यसको इतिहासबारे भने, राणाहरुले रुख त रोपे तर, व्यक्तिको जग्गामा परेको हुनाले पछि काटिएको हो। गाउँको बीचमा निकै ठूलो थियो त्यो रुख। यो बाटो भएर हिँड्नेहरु रुखको छहारीमा सुस्ताउने गर्दथे।’
अहिले पनि गाउँका विकासका लागि यहाँ स्थापना गरिएका संस्था, उपभोक्ता समितिको नाम ओखरेनीवासीले ओकरानेकै नामबाट सञ्चालन गरिरहेका छन्। ‘हाम्रो पुरानो र ऐतिहासिक नाम हो, त्यसैले मर्न दिदैंनौं,’ लामा भन्छन्, ‘कि त नौलिङ ओखरेनी भनिनुपर्छ।’लामाका अनुसार उतिबेला यो गाउँमा चिठ्ठीपत्र आउँदा ‘नौलिङ ओखरेनी नवलपुर थुम’ भनेर आउने गर्दथ्यो। यहाँका स्थानीय एकतामा बाँधिएका छन्।
आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊँ गाउँको विकासका लागि एकजुट हुन्छन्। लामो समयसम्म सडक सुविधाबाट वञ्चित उनीहरुले चाम्खु भन्ने स्थानबाट ५ किलोमिटर सडक आफैले खनेर ओखरेनीसम्म ल्याएका छन्। यहाँका बासिन्दाले स्थानीय निजी स्रोतबाट गाउँमा बत्ती पनि आफैले बाले। ‘हामीले अरुको आश गरेनौं, आफ्नो गाउँलाई आफैले बनायौं,’ स्थानीय पदमबहादुर लामाले गर्वसाथ भने।
बौद्धमार्गीहरुको बसोबास रहेको यो टोलका विभिन्न स्थानमा सेता आकर्षक गुम्बा, स्तुपाले ओखरेनीको सुन्दरतालाई थप अब्बल बनाएको छ। बाटैभरि र टोलभरि टाँगिएका ध्वजापताका, वरिपरि राता, निला तथा हरिया जस्ताका एकैनास घरहरु अनि बस्तीको बीचमा रहेको ३५ फिट अग्लो सुन्दर बुद्धमूर्तिका साथै हरेक बिहान उठ्नेबित्तिकै हेर्न पाइने लाङटाङ हिमालले यो गाउँ कुनै कविले कल्पना गरेर लेखेको स्वर्गभन्दा कुनै कमी छैन। अझ, अहिले रातो बस्तीमा झनै रातो गुराँस फुलेर गाउँ रंगिएको छ।पुस, माघमा यहाँ बाक्लो हिउँ पर्ने भएकाले झन् यो आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो।
प्राकृतिक दृश्यपानका लागि मात्रै नभई अर्गानिक खाद्य तथा नगदेबालीको स्वाद लुट्न पाइने ओखरेनी हिमाली गाउँ हो। बजारमा पाइने मलहरु पुग्दै नपुगेको यो गाउँमा पाइने आलु, मुला जिल्लामा मात्रै होइन बाहिर पनि प्रख्यात छ। चिसो ठाउँ भएकाले यहाँ धान नौ महिनामा मात्रै पाक्छ। कोदो हुँदैन। त्यसैले यहाँका बासिन्दा आलु, मुला उत्पादन भएपछि धान, मकै, कोदोसँग साट्न बेँसी झर्ने गर्दथे।
‘आलु बेचेर यहाँका केही व्यक्तिले काठमाडौंमा घर बनाएका छन्,’ स्थानीय आङपासाङ शेर्पाले भने।अब यो आलु र मुलाको कथा पनि मेटिने अवस्थामा पुगिसकेकाले स्थानीय चिन्तित छन्। यहाँ आउने जंगली बँदेलले दुःख दिन थालेपछि किसानहरुले आलु, मुला लगाउन बिस्तारै छाड्न थालेका छन्। ‘त्यसको विकल्प अहिले किवी खेती सुरु गरिएको छ,’ गाउँकै अगुवा तथा स्थानीय विद्यालयकी शिक्षिका शान्ति शेर्पा भन्छिन्, ‘गाउँमा अहिले तीन हजारभन्दा बढी बिरुवा रोपिएको छ।’
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भएकाले यो गाउँमा पाइने बँदेल, मृग, कालिजहरु मार्न प्रतिबन्ध छ। त्यसैले पनि स्थानीयले अन्य बालीको विकल्पमा किबी रोजेका हुन्। ‘यहाँको हावापानीअनुसार किबीको उत्पादन राम्रो हुने देखियो,’ शान्तिले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले किबी पकेट क्षेत्र घोषणा गरी किबी खेती विस्तार गर्ने भएकाले गाउँवासी उत्साहित छन्।’ तर, स्थानीयवासी यहाँ पाइने आलु र मुला भने थोरै लगाएर भए पनि गाउँको पहिचान गुम्न नदिने पक्षमा छन्।‘काठमाडौंबाट आलु र मुला खान भनेर धेरै व्यक्तिहरु आउने गर्छन्,’ आङछिरिङ भन्छन्, ‘यहाँको परम्परा, सम्पदा, संस्कृतिलगायत मौलिकपनलाई जिवित राख्नेछौं।’
ओखरेनीवासी गाउँमा आएका आगन्तुकलाई भव्य सम्मान गर्छन्। स्नेह गर्छन्। सत्कार गर्छन्। यहाँ आइपुगेका पाहुनालाई अहिले व्यक्तिकै घरमा बस्न दिइन्छ। पछिल्लो समय यहाँ पर्यटकको चासो बढेको छ।
‘अब हामी होमस्टेको तयारीमा छौं,’ पदमबहादुर भन्छन्, ‘हामी कर तिर्छौं, होमस्टेका लागि गाउँपालिकाले पहल गर्नुपर्छ।’ उनले ठाउँ अभावका कारण ठूलो संख्यामा आउने पाहुनालाई रातको समयमा छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने अवस्था भएको बताए।उन्नत जातको गाई, चौरी, भेडा, याक यहाँको अर्को विशेषता हो। पहिलेजति चौंरी भने अहिले पाइदैन। यहाँ पाइने लेकाली आलु, मुलाको अचार, कोदोबाट बनाइएको मदिरा, लेकाली मकैको ढिँडो, लेकाली साग, स्थानीय कुखुराले पनि पयर्टक आकर्षण गर्दछ।
कसरी पुग्ने ओखरेनी ? आकर्षक गन्तव्यस्थल भएर पनि ओखरेनी ओझेलमा छ। आफ्नै सवारीसाधन हुनेहरु त काठमाडौंबाट एकै दिनमा पुगेर फर्कन सक्छन्।
काठमाडौंको साँखुबाट यो ठाउँ ५८ किलोमिटरको दुरीमा पर्छ। सार्वजनिक बसको यात्रा गर्दा चाबहिलको चुच्चेपाटीबाट ७स्३० मा यहाँका लागि बस छुट्छन्। काठमाडौं–बनेपा–पाँचखाल–जिरोकिलो–मेलम्ची–नवलपुर–गुफाडाँडा हुँदै ओखरेनी आएर बास बस्न सकिन्छ। ओखरेनी नजिकै रहेको गुफाडाँडा गतवर्ष राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन भएको स्थान हो। सम्मेलनपछि गुफाडाँडा लगायत आसपासका क्षेत्र राष्ट्रिय चर्चामा छ।
त्यस्तै जिल्ला सदरमुकाम चौताराबाट २२ किलोमिटरको दुरीमा रहेको ओखरेनीका लागि अर्को रुट झनै रमणीय छ। चौताराबाट गौराती मन्दिर हुँदै स्याउले बजार पुगिन्छ। स्याउले बजारबाट उकालो लागेपछि विभिन्न बास्नादार वनस्पतिको स्वाद लिँदै सानो ओखरेनी पुगिन्छ। शेर्पाहरुको गाउँमा पाइने नुनचिया, रेल्दुक, आलु मःम ९जुन ओखरेनीमा पनि पाइन्छ० लगायत नयाँ स्वाद लिँदै खस्रे लामीडाँडाबाट ओखरेनी पुग्न सकिन्छ।
यो बाटो धार्मिक पर्यटकीय स्थल पाँचपोखरी पुग्ने रुट पनि हो। आँखै अगाडिको हिमाल हेर्दै लोठसल्ला, लालीगुराँस, गोब्रे सल्लासँग खेल्दै, रमाउँदै प्राकृतिक छटामा रमाउन पाइन्छ। खुलेको हिमाल र लालीगुराँससँग रमाउनका लागि पुसदेखि माघसम्म उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्छ-ओखरेनी।